> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Data ka ah Barzakh, formatted
Waxaan ka ah Barzakh, formatted soo kaban karto, Files?
Waxaan leeyahay Seagate drive adag dibadda. Saaka caruurta aan si kama formatted xijaab ku yaal. Hadda Risaalo ka madhan tahay oo dhan faylasha waxay ku tageen. Ma ahan in aan gurmad kasta oo iyaga ka mid ah. Sidaas, aan su'aasha waa in halkaas xal ii dhabarkiisa si aad u hesho files ii?
Dadka isticmaala, formatting shil qoqobkii wuxuu noqon karaa run ahaantii ay musiibo dhacdo. Sida kiiska kor ku xusan, waxaad u maleynayaa in dhammaan faylasha on xijaab aad formatted waxaa lagu waayay. Laakiin sidaas maaha run ahaantii run. Faylal ay weli ku jiraan xijaab in, kaliya ma waxaad iyaga ka heli karaan. Waxay la waayay doonaa si joogto ah keliya marka xogta cusub ku hadlo xijaab iyaga overwrites. Taas macnaheedu waxa weeye in aad sida macquulka ah soo kaban karto, xogta laga hadlo xijaab formatted haddii aadan files wareejiyo xijaab in weli.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa soo kabasho formatted xogta xijaab u saamaxaya inaad ku dhowaad dhammaan kabsado files lumay ka hadlo xijaab formatted. Waxa ay taageertaa dib u soo kabashada oo kala duwan file, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, files audio, waraaqaha, iwm Waxaa si buuxda la jaan qaada kombiyuutarada Windows iyo Mac, iyo sidoo kale drive dibadda adag.
Hel version tijaabo ah barnaamijka dib u soo ceshano xogta laga hadlo xijaab formatted hadda ah.
Qabtaan ah Barzakh, formatted Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Ka hor inta aanan bilaabin, fadlan hubi in aad in aadan awoodin in ay soo dajiyo barnaamij ee Risaalo formatted.
Haddaba isku dayno la Windows version of Wondershare Data Recovery. Users Mac raaci karaan howlaha la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 hab kabashada Select inuu ka soo kabsado xogta laga hadlo xijaab formatted
Sida image hoos ku soo bandhigay, waxaad ka heli kartaa 3 kabashada hababka dib markii socda barnaamijka. Fadlan akhri tilmaamaha si taxadar leh in aad ogaato faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan.
Halkan, waxaad dooran kartaa "Barzakh Ladnaansho" inuu ka soo kabsado dhan formatted faylasha xijaab.
Tallaabada 2 Scan xijaab formatted
Markaas barnaamijka tusi doono oo dhan drives on your computer adag, waxa kaliya oo aad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah in xijaab aad formatted saaranyahay oo guji "Next" in ay sii wadaan.
Qoruhu ku drive marsiiyey adag lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Fadlan dooro Risaalo formatted oo ka dhacay on "Start" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka xogta laga badiyay.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka hadlo xijaab formatted
Dhammaan xogta recoverable lagu soo bandhigi doonaa "Noocyada File" iyo "fayl" daaqada barnaamijka dib markii iskaanka. Waxaad ka arki kartaa magacyada file in lagu hubiyo sida badan ee aad files lumay la dib ula karo.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan files oo ku saabsan inuu ka soo kabsado iyo riix aad tahay "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files soo kabsaday intii lagu jiray soo kabashada dib ugu Risaalo formatted.